May 2021 – " कञ्चनजंगा News "
सुत्ने बेलामा पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै, कस्तो सपना देखेमा शुभ या अशुभ हुन्छ, हेर्नुहोस्
No Comments on सुत्ने बेलामा पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै, कस्तो सपना देखेमा शुभ या अशुभ हुन्छ, हेर्नुहोस्
No Comments on पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन ,जेष्ठ १८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
No Comments on भुलेर पनि गर्नु हुँदैन मंगलबारका दिन यी पाँच काम
No Comments on नेता बचाउन चन्दा उठाउँदै जनता : अनलाइनबाट एक घण्टामा यसरी एक लाख बढी आइरहेको छ
काठमाडौं । विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको जीवन रक्षाका लागि सहयोगको भीख मागिरहेका छन् ।
उनको परिवारले सहयोगको अपिल गरेपछि अहिले हरेक २–३ मिनेटमा १० हजारका दरले सहयोग संकलन भइरहेको छ ।
एक घण्टामा नै एक लाख भन्दा माथी संकलन भइरहेको छ ।
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्ज्वल थापाको जीवन रक्षाका लागि मानिसहरुले स्वःस्फूर्तरुपमा चन्दा उठाइरहेका छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण मेडिसिटी अस्पतालमा भेन्टिलेटरमा उपचाररत थापाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ ।
उनको उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन परिवार र विवेकशीलका कार्यकर्ताले चन्दा संकलन अभियान सुरु गरेको लगभग २४ घण्टा बित्दैछ । विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डेका अनुसार अहिलेसम्म गोफण्ड नामक अनलाइन प्लेटर्फममार्फत् झण्डै २५ हजार ६१७ डलर झण्डै ३० लाख नेपाली रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । बैंक खातामा २६ लाख ५० हजार गरी झण्डै ५० लाख रुपैयाँ रकम संकलन भएको छ ।
सहयोग बढाउन चाहानेले सेयर गरिदिनुहोस् ।
संयोजक पाण्डेका अनुसार थापाको एक्स्ट्राकोर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजेनसन (एक्मो) प्रविधिबाट उपचार भइरहेको छ । यही प्रविधिबाट उपचारका लागि ग्राण्डी अस्पतालबाट मेडीसिटीमा ल्याइएको हो । थापाको उपचारमा दिनको ४–५ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि सहयोग संकलन सुरु गरिएको थियो । पाण्डेले भने, ‘आज साँझ चिकित्सकहरुले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बताउनुहुन्छ, त्यसपछि थप निर्णय होला ।’
तर, थापाको परिवार र शुभेच्छुकहरूले सद्भावका लागि धन्यवाद भन्दै प्रसाईले दिने भनेको सहयोग आवश्यक नपर्ने बताएको छ । हाल उज्वल थापाको परिवार, आफन्तजन, साथी तथा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोगले नै स्वास्थ्य उपचारको खर्च व्यहोरिरहेको र भविष्यमा पनि त्यसै गर्ने भएकोले श्री दुर्गा प्रसाईंलाई सद्भावको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै उहाँले दिने भनेको सहयोग आवश्यक नपर्ने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ’ उनीहरुले प्रेस नोटमार्फत भनेका छन् । तर थापाको उपचारमा लाग्ने खर्चभन्दापनि धेरै नै रकम संकलन भएको छ । यो रकम के गर्ने भन्ने बारे अहिले नै निर्णय आएको छैन ।
No Comments on जेठ १८ गतेबाट यि ३ मुलुकमा अन्तराष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने सरकारको निर्णय (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । सरकारले चीन, कतार र टर्कीमा हवाई उडान सुरु गर्ने सरकारको निर्णय गरेको छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले साक्षातकार कार्यक्रममा त्यसको जानकारी दिएका हुन् । उडान सुचारु गरिएका मुलुकवाट आएका यात्रुहरु दुई खोप लगाएको छ भने होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने ।
No Comments on “९ लाख बाती बलेको फोटोलाई हातले छुनुहोस र ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस, मात्र एक मिनेट लाग्छ जसले ध्यान दिएर पढ्न नभुल्नु होला नत्र पछुतो होला”
महालक्ष्मीको पूजा र आराधना गर्नाले धन र समृद्धि प्राप्त हुने विश्वास समेत रहेको छ ।हिन्दु धर्मअनुसार, यदि तपाई देवी लक्ष्मीलाई खुशी राख्न र उनलाई आफ्नो घरमा आकर्षित गर्न सक्षम हुनुभयो भने धन र समृद्धिले तपाइलाई कहिले पनि छोड्ने छैन ।
देवी लक्ष्मी धन, भाग्य, प्रेम र सौन्दर्यकी देवीको रुपमा मानिन्छ। उनलाई चंचल स्वभावको पनि मानिन्छ किनकि उनि एकै ठाउँमा स्थायी रुपमा बस्न सक्दिनन् भन्ने विश्वास पनि रहेको छ ।
यो रमाइलो पाठ आनन्द लिनुहोस् !
हतपत म्यासेज गरें, काहाँ छौ तिमी ? फोन पनि अफ छ, साह्रै याद आईरअ‍ेको छ तिम्रो ।म्यासेज सेण्ट भयो, झट्ट सम्झीएं म्यासेज नगरेको भए हुने, साच्चै उसले आत्महत्या गरेकी भए यो म्यासेजले पुलिसको झमेला थप्न सक्छ । रिप्लाई आएन म्यासेजको । बिरामीको बहाना बनाएर छिट्टै निस्कीएं अफिसबाट । घर पुग्दा श्रीमती छोरालाई औषधी ख्वाउँदै थिई, देख्नासाथ सोधि कीन छिटो आउनु भयो ? तेस्सै मैले छोटो उत्तर दिएं । कपडा फेरें, श्रीमतीले चिया दिंदै भनि खाजा खानुभयो ? अं खाईसकें फेरी अर्को झुट बोलें । हेक्का नै भएन तिमीले खाएउ त भनेर सोध्न पनि । उसो त म श्रीमतीले के खाई ,के लगाईमा ध्यान पनि दिंदीन । उसले चीत्त दुखाईन होली आज पनि, बानि परिसक्यो मेरो स्वभावको उसलाई । श्रीमती गै सकेपछि सम्झें छोरालाई औसधी ख्वाउँदै थिई, के भएको रहेछ भनेर सोध्नु पर्ने मैले । मेरो ध्यान सन्ध्याकै फोनमा थियो । यस्तो त कैलेहि भएको थिईन म । सन्ध्या मेरी फेसबुक फ्रेण्ड हो । ब्याचलर पढ्दै गरेकी २० बर्षकी सन्ध्यालाई मैले भेटेको पनि छैन, फोनमा कुरा हुन थालेको २ महिना भयो, तर म झापा र उ काठमाडौं भै दिंदा भेट्ने रहर रहरै बनेको छ ।म भन्दा १४ बर्ष कान्छी त्यो केटीले म मा ठुलै प्रभाव जमाएकी छ । उ भित्रको बिचार, कुरा गर्ने शैली र मलाई बुझ्ने क्षमताले गर्दा म आजकल उसकै उमेर छेउछाउको पागल प्रेमी बनेको छु । उसको र मेरो सबै भन्दा मिल्ने स्वभाव किताव पढ्नु हो । उसलाई साहित्यमा साह्रै रुचि हुनु र म अंग्रेजी साहित्यको प्रोफेसर हुनुले पनि हामीलाई बाँधेको छ, जस्तो लाग्छ । फेरी श्रीमतीले ध्यान भङ्ग गरिदीई, एकछिन बाबु संग बसिदिनुस् न, म पसल जानु छ । हजारको नोट दिदैं भनें, जाउ म हेर्छु । पर्दैन पैसा म संग नै छ, उ ढोकाबाट निस्केको हेरिरहें ।मेरी श्रीमती साह्रै सोझी छ, कुनै कुराको गुनासो र माग गर्दिन । सबैले उसको रुप र गुणको तारिफै गरेको सुन्छु । आमा गर्विलो हुँदै भन्नुहुन्छ, मैले हेरेर ल्याएकी बुहारी पो हो त, यति माया त छोरीले पनि गर्दैनन् । एकदमै कम बोल्ने स्वभावकी छ उ । मास्टर्स गरेकी मेरी श्रीमतीको अहिले सम्म फेसबुक छैन । सिउँदो भरि सिन्दुर लगाउँछे उ, आज सम्म देखेको छैन उसले अध्यारो अनुहार लगाएको । ठुला ठुला आँखा, मिलेको दाँत, बाधेपनि बाटेपनि उत्तीकै सुहाउने उसको लामो कपाल । यी सबै कुराले उ म भन्दा दसौं गुणा राम्री छ । सबै साथी भन्छन् भाग्यमानी रैछस्, भाउजु जस्तो असल श्रीमती पाईस् । हाम्रो जस्तो कचकचे बुढी पर्यो भने लाईफ तेसै खेर जान्छ । मलाई अरुको श्रीमतीले श्रीमानलाई गरेको ब्यबहार देख्दा म भाग्यमानी नै हुँ की झैं पनि लाग्छ । माया लाग्छ मेरी श्रीमतीको मलाई । तर पनि मनमा उसको स्वभावले गर्दा केही दुरी बढेको झैं लाग्छ ।उ टीपीकल बुहारी छ, म छु मनको चन्चल । श्रीमतीको यो खाले स्वभावले गर्दा म पनि घरमा टीपीकल हजबेण्ड बनेको छु । श्रीमती कैलेहि ठुलो स्वरले नबोल्ने, जीस्काए पनि संधै लाज मान्ने, अह्राएको काम खुरुखुरु गर्ने, जीद्दी नगर्ने, हुँदा पनि केटा मान्छेले रित्तो महशुष गर्दो रहेछ ।
अनि कहाँ बसुलाँ भनेर आएको त । तिमी त्यति टाढा बाट मलाई भेट्न आएको छौ, मैले कोठामा पनि लगिन भने त तिमी माथि अन्यानै भै हाल्यो नी उ जीस्कीई । ट्याक्सीमा उसको चावहिलमा रहेको कोठामा पुगें । सिङ्गै फ्याट लिएर बसेकी रहिछ । फ्ल्याटको सजावट हेर्दा हुनेखाने परिवारकी छोरी रहिछे भन्ने लाग्यो । आफुले कलेज पढ्दा एउटा कोठा लिएर स्टोपमै खाना बनाएर खाएको दिन सम्झें । खना खायौं, उसको जीस्कने बानी, चन्चले स्वभाब, बैंसालु यौवन सबै मेरो अगाडी थियो । तिमी एकछिन सुत म कपडा धुन्छु भनि उसले । रातभरीको अनिदो थिएं, उसको बेडमा निदाएं । २ बजे उसले उठाएर भनि अव राति सुत मेरो सपिङ गर्नु छ, सिटी सेन्टर जाउँ । हामी कमलपोखरी स्थीत सिटी सेन्टर पुग्यौं, उसले चाहिएजती सामान किनी, १५ हजारको बिल भएछ, मैले नै तिरिदीएं ।मुभी हेरेर फर्कने सल्लाह भयो, फिल्म सकेर राती फर्कीयौं हामी । बाहिरै खाना खाएर जाने भन्न थाली उसले, क्यान्डील नाईट डिनरको उसको रोमाञ्चकतामा मैले साथ दिएं ।कोठामा फर्कीए पछि उ पल भरको लागि म संग छुट्न नचाहेझै टांस्सीरहि । ममा फेरी एउटा बैसको दिन फर्कीएको थियो । उसले मलाई गरेको मायामा एक तमासको भएको थिएं । आजै भेटेकी युवती मलाई जन्मौं पुरानी प्रेमीका लाग्दैथिई । हामी एउटै ओछ्यानमा थियौं, मैले एक पटक पनि आफ्नो ५ बर्षको छोरा र शुशिल श्रीमतीलाई सम्झीईन । पश्चतापको त कुरै थिएन म सन्ध्यालाई माया गर्थे ।समर्पणकै कुरा गर्ने हो भने म एउटा बिबाहितले के त्यागें होला र जबकी एउटा अन्जान ब्यक्तीको अंगालोमा बिश्वासको भरमै आफुलाई हराईदीई उसले । यो मन, तन र जीवनमा तिम्रो पुरापुर अधिकार छ समीर उसले बढो भावुक भएर भनेकी थिई ।
बिहान उठ्नासाथ उसले आज नगरकोट घुम्न जाने भन्न थाली । मलाई यो शहरमा कसैले नचिन्ने हुँदाँ स्वतन्त्र पंक्षी भएको थिएं । १० बजे नगरकोटको लागी निस्कीयौं । दिनभरी घुमेर बेलुका त्यहींको रिसोर्टमा बसेउँ । म सन्ध्या जस्तै श्रीमती चाहन्थें तर समयले मलाई बेग्लै श्रीमती जुराएको थियो । भोलीपल्ट बिहान १० बजे घरबाट आमाले फोन गर्नुभयो, छोरा लडेर निदारमा ५ वटा टाँका लगाएको छ , हस्पीटलमा राखेको छ भन्ने खवरले घर जानु पर्ने भयो । नगरकोटको रिसोर्टको बिल बुझाएर हामी फर्कीयौं । म छोराकोे निदारमा टाँका लगाउनु परेको कुराले तनावमा थिएं, सन्ध्या म आज फर्कदै छु भन्ने कुराले उदास थिई । बाटोमा सामान्य कुरा मात्र भयो । सिधै नयाँ बसपार्क गएर रात्रीबसको टीकेट लिएं ।उसले आँखा भरी आँसु पारेर भनी तिम्रो नामको सिन्दुर त दिन्छौ दिंदैनौ । मलाई तिम्रो नामको औंठी लगाईदेउ । उल्झन थपियो अर्को, पैसा कम थियो, बैंक खोजेर २० हजार झिकें र उसको ईच्छा अनुसारको औठी किनीदिएं र लगाईदीएं । उदास आँखाले बिदा गरि मलाई सन्ध्याले । छोरालाई घरमा ल्याई सकेको थाहा पाएपछि सिधै घर पुगें । अफिसको काम छ भनेर सन्ध्यालाई भेट्न पुगेको थिएं । सोझी श्रीमतीले म पुग्नासाथ स्पस्टीकरण दिई, हजुर कामले काठमाडौं गएकाले मैले आमालाई बाबु लडेको कुरा नभन्ने भन्दै थिएं, आमाले मान्नु भएन ।मनमनै खुशी भएं स्पस्टीकण त मैले दिनु पर्ने तर तक्दीर बलियो मेरो । दिन फेरी सामन्य हुन थाल्यो उहि अफिस, यहि घर ,उहि दिनचर्या । फेरीएको थियो त सन्ध्या संग कुरा गर्ने तरिका । त्यो २ रात उ संगै बसेपछि मलाई उ संग खुलेरै बोल्न मिल्ने वातावरण बनेको थियो । उसका म्यासेज कैले आउँछौ र तिम्रो याद आउँछ साह्रै भन्ने शब्दले नै भरिन्थे । एक दिन उसले दिउँसो फोन गरि र रुन्चे स्वरमा भनि समीर मेरो ममीको किड्नीमा स्टोन छ मैले यो कुरा तिमीलाई भनेको थिईन । के गर्ने गर्ने भएको छु आत्तीएर । मलाई यो कुराले नराम्रो लाग्यो नआत्तीउ केही उपाए लाग्छ भन्दै थिएं उसले मेरो कुरा पुरा नहुँदै भनि भएको पैसा ममीको उपचारमै खर्च भएको छ, भन्दा भन्दै ऋण पनि पाईएन । प्लीज हेल्प गरन म तिमीलाई तिर्छु ।
No Comments on नेपाली जमिन फिर्ता ल्याइन्छ, भारतसँग गम्भीर कुराकानी भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको भएकाले फिर्ता ल्याउनेबारे भारतसँग ग–म्भी–रताका साथ कुराकानी भइरहेको बताएका छन् ।
उनले महाकाली नदी पूर्वको जमिन नेपालको भएको र त्यसलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरी संविधानको अ-नु-सूचीमा राखिसकिएको उल्लेख गरे । ती भू-भाग फिर्ता ल्याउन लागि भारतसँग वार्ता भइरहेको बताए ।
‘महाकाली पूर्वको जमिन नेपालको हो । र, हामीले हाम्रो जमिन हाम्रो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा सामेल गरेर पास गरेका छौँ । र, त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा पनि सामेल गरेका छौँ,’ ओलीले भने, ‘यस सम्बन्धमा हामी भारतसँग ग–म्भी–रताका साथ कुराकानी गरिरहेका छौँ । तर, यथार्थ के हो भने विगत ५८ वर्षदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा रहेको छ । र हामीले संवादको माध्यमबाट त्यस क्षेत्रलाई फिर्ता ल्याउनुछ ।’
छिमेकीसंग केही कुरामा म–तभे—द वा गलत बुझाई हुनसक्ने भन्दै उनले सबै समस्याको समाधान वार्ता मार्फत गरिने बताए ।- शिलापत्र
चर्चित कमेडियन आदर्श मिश्राले अस्पतालमा बुवाको उपचार राम्रो संग नभएका कारण मृत्यु भएको भन्दै आरोप लगाएपछि चिकित्सकले गरे त्यसको खण्डन
No Comments on चर्चित कमेडियन आदर्श मिश्राले अस्पतालमा बुवाको उपचार राम्रो संग नभएका कारण मृत्यु भएको भन्दै आरोप लगाएपछि चिकित्सकले गरे त्यसको खण्डन
काठमाडौ । चर्चित कमेडियन आदर्श मिश्राले अस्पतालमा बुवाको उपचार राम्रो संग नभएका कारण मृत्यु भएको भन्दै आरोप लगाएपछि चिकित्सकले त्यसको खण्डन गरेका छन् । वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) र नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालका कारण आफ्ना बुवाको निधन भएको उनको भनाई छ । आफ्नो अस्पताल माथि यस्तो आरोप लगाउँदै आदर्शले भिडियो सार्वजनिक गरेपछि नारायणी क्षेत्रीय अस्पतालका चिकित्सक फिजिसियेन तथा डाइलोसिस बिभाग प्रमुख निरज सिंहले त्यसको प्रतिक्रिया दिएका हुन् । एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले उपचारमा कुनै लापरवाही नभएको बताएका छन् ।
भिडियोमा उनले भनेका छन्, कोभिडको लागि २ वटा डाइलोसेस मेसिन छुट्याइएकोमा एउटा विग्रिएको थियो । त्यो अवस्थामा अस्पतालमा विरामीको चाप बढेपछि अब कसरी डायलोसेस गर्ने भनेर बैठक बसेर अब कसरी उपचार गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको हो । त्यसबेलाको निर्णय अनुसार सुरुमा गम्भिर विरामीलाई सुरुमा विनोद मिश्रााको डायलासिस गरिएको चिकित्सकको भनाई छ । उनले केही समय देखि नै विनोदको डायलासिस आफ्नै अस्पतालमा भइरहेको बताएका छन् ।
अन्तिम अवस्थामा पनि आफ्नै अस्पतालमा डायलासिस भएको बताउँदै त्यसपछि के भयो ? त्यसवारे आफुले भन्न नसक्ने बताएका छन् । तर उपचारमा आफुहरुले उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखेको बताएका छन् । आफ्नो टिमले ४ पटक डायलासिस गरेको बताउँदै कुनै लापरवाही नभएको जानकारी दिए । अन्तिम पटक साढे ३ घण्टा डायलासिस गरिएको बताएका छन् ।
बैठकको निर्णय अनुसार विनोद मिश्राालाई साढे तीन घण्टा गरिएको र अन्य विरामीलाई दुइ घण्टा गरिएको बताएका छन् । तर दुई घण्टा डाइलासिस गरिएका ब्यक्तिको जिवन सकुशल रहेको भएपनि साढे ३ घण्टा लाइसासिस गरिएका विनोदको मृत्यु भएको घटना प्रति दुख ब्यक्त गरेका छन् । दुई घण्टा गरिएका उप्रेती नाम गरेका ब्यक्ति भएको बताएका छन् । आफ्नो अस्पतालवाट विनोद मिश्रा चितवन मेडिकल कलेज गएको आफुले थाहा पाएको बताएका छन् ।
अस्पताल आउँदा नै विनोदको अवस्था निकै गम्भिर रहेको उनको भनाई छ । नारायणी अस्पतालमा डायलासिस नगरेका कारण विरामीको मृत्यु भयो भनेर आरोप लागेको भन्दै उनले चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । आफ्नो परिवारलाई समेत सामाजिक सञ्जाल र फोनवाट समेत चेतावनी आएको पनि उनले जानकारी गराएका छन् ।
No Comments on काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा कडा पारेकै दिन प्रशासनले दियो सर्वसाधारणलाइ न्निकै सजिलो सुविधा
हार्दिक बधाई यिनै हुन् नेपाली चेली रेबेका राई बनिन् बेलायतको सफल वकिल,सलाम छ नेपाली चेलीलाई !
No Comments on हार्दिक बधाई यिनै हुन् नेपाली चेली रेबेका राई बनिन् बेलायतको सफल वकिल,सलाम छ नेपाली चेलीलाई !